Ndụ Nestle Dị Ọcha Na Mmiri Mmiri 12 x 50cl (Tesco) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Ndụ Nestle Dị Ọcha Na Mmiri Mmiri 12 x 50cl (Tesco) - Ordrs
Ndụ Nestle Dị Ọcha Na Mmiri Mmiri 12 x 50cl (Tesco)
Mmiri Mmiri Mmiri N'agbanyeghị
Anyị na-agba mbọ na-amị adigide nkwakọ na anyị karama bụ 100% recyclable
Ndụ Nestlé Dị Ọcha Ka Mmiri Mmiri Na-agba Mmiri nwere ọkụ, na-enye ume ọhụrụ dị mma maka ụbọchị ezinụlọ. Enweghị shuga, na calorie efu na ịbụ 100% mmiri nkịtị, 12x50cl multipack anyị na-enyere gị aka ime ka ezinụlọ gị nwee ume * n'agbanyeghị ihe ọ bụla.
* Mmiri na-enye aka na mmezi nke arụ ọrụ anụ ahụ na nke nghọta na usoro iwu kwesịrị ịdị na ọnọdụ okpomọkụ. Ọ dịkarịa ala 2L mmiri, site na isi mmalite niile, kwesịrị ị consumedụ mmiri kwa ụbọchị dị ka akụkụ nke nri na ndụ dị mma.
Ezigbo ezinụlọ bụ ezinụlọ nwere obi ụtọ ma anyị kwenyere na mgbe ị na-a wellụ mmanya nke ọma, ị ga-ebi nke ọma. Anyị niile maara mkpa ọ dị ị toụ mmiri buru ibu dị ka akụkụ nke nri kwesịrị ekwesị. N'ezie, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ezinụlọ gị niile nwee ume. Ezigbo ezinụlọ bụ ezinụlọ nwere obi ụtọ ma anyị kwenyere na mgbe ị na-a wellụ mmanya nke ọma, ị ga-ebi nke ọma. Anyị niile maara mkpa ọ dị ị toụ mmiri buru ibu dị ka akụkụ nke nri kwesịrị ekwesị. N'ezie, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ezinụlọ gị nwee ezigbo ahụ ike.
Họrọ Nestlé Pure Life maka ezinụlọ gị
Ngwugwu nha: 6000ml